Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l1013 lar
Ilay irin'ny firenena rehetra
Alarobia 05 Jona
Vakio ny Hagay 2:6-9. Inona no toky omena eto ary ahoana no tokony ho fahazoantsika ny fahatanterahany?
Tamin’ny alalan’i Hagay no nanambaran’Andriamanitra fa hisy fampihorohoroana lehibe ny firenena amin’ny andron’i Jehôvah, rehefa hameno ny tempoly ny fanatrehan’Andriamanitra. Niantso ireo mpiara-belona taminy ny mpaminany mba tsy ho variana amin’ny fahoriana sy ny fahantrana mihatra aminy fa hitazana kosa ny voninahitry ny fanjakan’Andriamanitra ho avy, izay tondroin’ny tempoly.
Ny antony lehibe nanamboarana ny tempolin’i Jerosalema mba hanana famirapiratana fatratra dia ny hahatonga azy ho mendrika ny fanatrehan’ Andriamanitra. Araka ny voalaza ao amin’io andininy io anefa, dia tsy ao amin’ny trano be voninahitra toy izany no tian’i Jehôvah honenana fa Izy mihitsy no hameno voninahitra ilay trano amin’ny fanatrehany. Tsy nilain’ny olona ny nisahiran-tsaina be loatra mikasika izay fomba hamatsiany vola ny fananganana ny tempoly. An’Andriamanitra, Izay efa nanome toky fa hitoetra ao amin’io tempoly vaovao io, ny harena sarobidy rehetra mety ilaina amin’izany. Izy Andriamanitra mihitsy no hahatonga ny tempoly hamirapiratra.
“Koa raha mbola nanao fiezahana hamita ny asany sy nitady fanavaozam-pahasoavana avy any ambony izy ireo, dia nisy hafatra naverimberina taminy nampitondraina an’i Hagay sy Zakaria. Ireny hafatra ireny dia nanome toky azy fa hahazo valisoa be ny finoany, ary tsy maintsy ho tanteraka ny tenin’ny Tompo ny amin’ny voninahitra ho avy hananan’ny tempoly vaovao. Ary rehefa hifarana tanteraka ny fotoana dia ao amin’izany tempoly izany mihitsy no hisehoan’Ilay Irin’ny firenena rehetra, Ilay Tompo sy Mpamonjy ny olombelona.” – MM, t. 469.
Nanome toky Andriamanitra fa ho lehibe kokoa noho ny voninahitra nananan’ilay tempoly teo aloha ny voninahitr’ilay tempoly naorin’izy ireo. Ho famirapiratana hafa mihitsy izany satria ny fanatrehan’i Jesôsy ara-nofo no hanome voninahitra izany. Ny fanatrehan’i Kristy marina tokoa no nahatonga ny voninahitr’ilay tempoly vaovao ho lehibe lavitra noho ny an’ny tempolin’i Sôlômônina.
Vakio ny Heb. 8:1-5. Na manao ahoana na manao ahoana famirapiratan’ny tempoly eto an-tany, dia tsy tokony hohadinointsika na oviana na oviana fa aloka sy tandindon’ny drafi-pamonjena ihany izany. Saintsaino ny hevitry ny hoe: amin’izao fotoana izao indrindra i Jesôsy dia miasa ho antsika ao amin’ilay “tena tabernakely” nataon’Andriamanitra fa tsy nataon’olona. Ahoana no fomba hianarantsika mankasitraka bebe kokoa ny maha-zava-dehibe ny hafatra momba ny fitoerana masina eo amin’ny foto-kevitry ny drafi-pamonjena?